Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweJamais ngesiFrentshi
Indlela yokusebenzisa "Jamais" ngesiFrentshi
Abantu abaninzi abaye bafunda isiFrentshi bayazi ukuba lulimi ngolwimi oluninzi oluphambukayo. Xa ubhala ngesiFrentshi, akukho lizwi elinye elidibanisa lula kunye nelinye. Ngoko, izinto zokuqala kuqala: qho qaphela ubupelingi bakho nale!
J'aimais, xa ispelingi ene "i," ithetha ukuba "ndiyithandayo," okanye ndandithanda / ndithanda / ndonwabile kwaye ndivela kwisenzi esithi " iinjongo ." Nangona igama elixutyushwa apha, nanini , lithetha "akukho."
I-Jamais idideka kuba ithatha indawo ye "pas" kwindawo yokungabikho. Kodwa phezulu kweli, linokuguqulela ngokuthi "naphakade" okanye "akakho" ngesiNgesi, ezimbini ezihlukeneyo.
Isibhengezo sesiFrentshi asisoze sithetha ukuthini "naphakade," yaye lithetha ntoni "akakho"? Impendulo emfutshane kukuba kuxhomekeke kumongo kunye nokwakhiwa kwesigwebo.
Ayi ... AmaJama athi "Awuze"
Kwilo lwakhiwo olubi, akakhothi "akukho." Umzekelo, kwisivakalisi:
"Andiyi kuyenza loo nto."
I-Jamais yenye yegama elincinci elingaphaya indawo ye- pas inxenye yezinto ezimbi kwisigwebo sokulahlwa. Ezinye zabanye zinguye , umntu kwaye zihle ziphi izibhengezo ezibi zeFransi . I-Jamais ayifuni imfuneko ukuba ibekwe ngqo emva kwesenzi. Ukugxininisa, ungaqala isivakalisi sakho kunye naloo mzekelo ungezantsi:
Jamais je U-vu vu wakhetha u-beau beau.
"Andizange ndibone into enhle."
Qaphela ukuba ekuthethwa ngesiFrentshi yanamhlanje, inxalenye ye " ne " yohluko ludla ngokuphindaphindiweyo, okanye litshatyalaliswa ngokupheleleyo. Ngoko kufuneka uqeqeshe indlebe yakho ukuba ugxile kwingxenye yesibini yokuchasana kunokuthembela kokuqala, " ne ".
I have never dit ça ithetha ngathi: " Yenza i-jamay di sa" okanye "i-jay jamay di sa," kodwa zombini izivakalisi zithetha into efanayo.
IJamae Ngeendlela Zakhe "Unaphakade"
Xa zisetyenziswe ngokwazo ngaphandle kokuphazamiseka, akakhothi "ukusa." Sisoloko sisisebenzisa kumbuzo osebenzisa ngokusemthethweni igama, okanye nge- si , kwigama elithi " si jamais " elithetha "ukuba nanini."
Umzekelo wokusetyenziswa ngokusemthethweni kuka- jamais kulo mongo uza kuba:
U-u-Ever allé e-Paris?
"Ngaba uye wafika eParis?"
Namhlanje, kuqhelekile ukusebenzisa i- already meaning "kakade."
U-e-déjà allé e Paris?
Ukuba awuyi ku-Paris, ifoni-moi.
"Ukuba uye waya eParis, ndibizele."
Ukuba ngaba isiFrentshi esithethayo ngokuphindaphindiweyo sihlahlela i- ne , uyayazi njani ukuba "ikhe" okanye "ayikho"? Njengoko kuchazwe ngasentla, kufuneka uqwalasele umongo wesivakalisi.
Ekugqibeleni, nanini inxalenye yamagama amaninzi, onke asebenzelana "naphakade" kwaye "akakho."
Iifrentshi zesiFrentshi ngeJamais
Wena u-plus belle que jamais mon amour. Uhle kakhulu kunene ndiyathanda .
Ngokunene, baya kuhlanganiswa kuze kube nanini . Ngoku, baya kuba kunye ngonaphakade .
Ndiyathanda ukuya konke . Ndiyamthanda ngonaphakade naphakade .
Le maintenant ou jamais . Kungoku okanye akunakuze .
Ngaba n ' ai never rien dit. Andizange ndixelele nantoni na.
Xa uhlolisisa iintlobo ezahlukeneyo zokwakha uFransi uza kubona kukho ukunyaniseka kunokuba kungenayo ne- pas .
Ngaba iNgxelo yesiFrentshi 'Malgré Que' Thatha iNgqungquthela?
Ukuxilongwa kwetenzi lwesiJamani kwixesha elizayo
Ukuguqulela 'Ukuva' kwiSpanish
Ukudala uMveliso omtsha-ISL Lesson
Ukuqonda nokusebenzisa iziPhulo zeFrench (Adjectifs)
I-Mercury Fulminate - Ukuphuka Okubi
Ubungqina Bokubonisa Ubunzima
Imbali ye Super Bowl III
Iifayile eziza phambili zoBugcisa ngee-Analogist Irish
Iindlela ezili-8 Ukuthula Kungathuthukisa iimpendulo zabafundi